China UHMWPE Chemical Delivery Hose CD300 orinasa sy mpanamboatra |Sinopulse
Tube anatiny:White UHMWPE .
Fanamafisana:Tady lamba mihenjana ambony .
Cover:Fingotra vita amin'ny sentetika avo lenta sy fingotra EPDM mahatohitra ny toetr'andro, Tany fisaka miloko miloko na corrugation surface
Temperature Range:-40°F～+120°F (-40°F～248°F)
Fampiharana:Ampiasaina indrindra amin'ny fitaterana 98% simika, solvents ary manimba.
Ny hose fingotra ho an'ny akora simika dia natao manokana ho an'ny famindrana simika sy asidra. Izy ireo dia mety amin'ny karazana fampiharana rehetra izay afindran'ny simika amin'ny alalan'ny suction na paompy. noho izany dia natao mampiasa fingotra synthétique avo lenta ireo.
Ny hose fingotra dia natao hitondrana akora/simika any amin'ny orinasa mandritra ny dingan'ny famokarana.Ny fantsona fingotra tsara indrindra dia mahatohitra ny fitaovana entiny .Iray amin'ireo marika tsara indrindra eo amin'ny sehatry ny famokarana hose fingotra izahay ary azo itokisana ny vokatray maneran-tany.
Famolavolana tsara indrindra ampiasaina amin'ny orinasa simika, sambo, sambo ary serivisy kamiao tanky.
Hose chimique malefaka miavaka ho an'ny fisintomana sy fanariana.
Namboarina miaraka amin'ny fitambarana fingotra conductive feno ho fiarovana fanampiny, mety tsara ho an'ny fampiharana izay mety hitrangan'ny herinaratra static.
Hose simika malefaka miavaka ho an'ny fangatahana famoahana ho an'ny karazana asidra, alkali, ester ary ketone.
Hose ho an'ny famindrana akora simika mahery vaika ho an'ny blender fracturing hydraulika amin'ny tsindry, ny fikorianan'ny gravité ary / na ny serivisy fisotro.
Fizarana No. ID OD Fanerena miasa Fanerena mipoaka sosona
santimetatra mm mm bara psi bara psi mivezivezy eny
teo aloha: UHMWPE Chemical Delivery Hose CD230
Manaraka: UHMWPE Chemical Suction & Discharge Hose CSD150
UHMWPE Chemical Suction & Discharge Hose C...